The iPriest: Ụlọakụ etiti nke Naijiri eweputala ego maka ichu Coronavirus ọsọ ukwu erughi ala by Alisonomi
Ụlọakụ etiti nke Naijiri eweputala ego maka ichu Coronavirus ọsọ ukwu erughi ala by Alisonomi
Ụlọakụ etiti nke Naijiri eweputa nnukwu ego iji nyee aka n’oge Coronavirus anyi n’ime ya. Mgbe onye nlekota nnukwu ụlọakụ a gwara ndi ntaakuko okwu, n’ubọchi monde gara-aga, n’Abuja, osiri na ụlọọrụ ha ga-ewepụta ijeri naira iri ise maka i buso ọria mgbụ coronavirus agha. Maazi Godwin Emefiele bu onyeisi ụlọakụ a kwukwara na ụlọọrụ ha enyeela ụlọakụnile di na Naijiria ohere, ihapụ ndi ji ha ụgwọ ọtụtụ oge maka ikwụghachi ụgwọ ha ji.
Maazi Emefiele kwụrụ na ijeri Naira iri ise a bu ego ha ga-ebinye ndi okacha mmuta na-ichota ogwu ahu mgbu na ndi ọzọ nile na-aru oru na mpaghara ulo ahuike nke a mgbe o na-agwa ndi ntaakuko okwu n’Abuja. maka inyere ha aka. O kwuru na-ego ahu ga-abu ihe nkwado nyee ha na ugbua ọtutụ mmadụ chọrọ enyemaaka ha n’ihi ahụ mgbụ Coronavirus.
Maazi Emefiele kwụrụ na ụlọ oru ha di nkwadebe ihụ na ulọakụ di iche iche n’obodo anyi, nakwa govamenti etiti ga-ebinwu ego ma ọbia na mkpa. Ndi ọka mmụta mgbako na mwepu kwụrụ na mkpebi nke ụlọakụ etiti magbụrụ onwe ya na mma. Ha kwụrụ na mkpebi a ga-enyere govamenti etiti aka imeri ihe isi ike nke ndapia ọnụ ahia mmanụ ugbọala ga-eweta n’afọ a.
Posted by The iPriest at 10:54:00 am